वैकल्पिक राजनीतिमा यस्तो चाहिन्छ युवाको भूमिका - Ratopati
- | टेकेन्द्र जोशी
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र यसको आवश्यकताका बारेमा बारम्वार चर्चा हुने गरेको छ । यतिबेला यो विषयको चर्चा नेपालमा मात्र होइन, विकसित मुलुकहरुमा पनि भइरहेका छन । वैकल्पिक पार्टी वा शक्ति निर्माण विशेषतः युवा पुस्ताको अगुवाईमा हुने गरेका छन् । जुन समाजमा युवा वर्गले परिवर्तनको नेतृत्व गरेका छन्, ती समाज उन्नत र विकसित भएका छन् । जुन देशका युवाहरुले परिवर्तनको निम्ति पहल लिए ती देशहरु विकास, निर्माण र समृद्धितर्फ अगाडि बढेका छन् ।
समयक्रमसँगै युग परिवर्तन हुने गर्दछ । समाज परिवर्तन हुन्छ, सँगसँगै मानिसहरुको चेतनास्तर पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् । कहिलेकाहीँ युवा नेतृत्वको अगुवाईमा समाज परिवर्तित हुन्छन् । समाजका तत्कालीन समस्याको समाधान दिन सक्ने नेतृत्व नै नयाँ शक्तिका रुपमा समाजमा स्थापित हुन्छन् । आधुनिक नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली समाज हरेक चरणमा परिवर्तन भइरहेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणसम्म आइपुग्दा पनि युवा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु सजिलो विषय होइन । यो त सचेत युवाहरुबाट मात्रै सम्भव छ । यतिबेला नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको खाँचो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरमा छ । त्यसो भएर नै संसारभरमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणबारे बहस भइरहेको छ ।
नेपाली समाजको जुन रुपमा परिवर्तन र विकास भयो, त्यत्तिले मात्रै अब पुग्दैन । पूरानो सोँच र संस्कारबाट अगाडि बढेका पार्टीहरुले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने कुरै भएन । अझ नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकमा पुराना सोँच बोकेका राजनीतिक शक्तिहरुबाट समग्र विकास सम्भव छैन । त्यसैले नेपालमा तत्कालीन समाजको समस्या समाधान गर्न सक्ने वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो भएको हो । वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु सजिलो विषय होइन । यो त सचेत युवाहरुबाट मात्रै सम्भव छ । यतिबेला नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको खाँचो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरमा छ । त्यसो भएर नै संसारभरमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणबारे बहस भइरहेको छ ।
आधुनिक नेपाल निर्माण भएसँगै बैकल्पिक सोँच बोकेका युवाहरुले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । जुन समयमा जुन उद्देश्यबाट तत्कालीन वैकल्पिक शक्ति बने, तिनीहरुले त्यही उद्देश्य मात्रै पूरा गरे । परिवर्तित सन्दर्भमा आफूलाई पनि रुपान्तरण गर्दै परिवर्तित समयको नेतृत्व लिन सकेनन् ।
अब नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि नयाँ सोँच सहितको वैकल्पिक शक्तिको खाँचो महसुस गरिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान समेत सुरु भएको छ । यो अभियानमा युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । अहिलेसम्मका राजनीतिक शक्तिहरु किन एउटा चारणको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात परिवर्तित समाजको नेतृत्व गर्न असफल भए ? यसको उत्तर खोज्दै आफूलाई समाज र परिवर्तनसँगसँगै गतिशील बनाउन सक्ने र अहिलेको परिवर्तित समाजको नेतृत्व गर्न सक्ने वैकल्पिक शक्ति निर्माण तत्कालीन आवश्यकता हो । यसको नेतृत्व युवाहरुले नै गर्न सक्छन् ।
नेपाल किन र के कारणले पछाडि प¥यो भन्ने सवालमा पनि मानिसहरुले छुट्टाछुट्टै धारणा बनाउने गरेका छन् । एकाथरिले राजनीतिलाई कमाइखाने पेशा बनाएका कारण कहिल्यै विकसित हुन सकेन भन्ने गरेका छन् भने अर्काथरिले शासनसत्तामा बस्नेहरुको आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दूरदृष्टि नभएकै कारणले यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने गरेका छन् । केहीले भन्ने गरेका छन् – आधुनिक नेपाल निर्माणमा पहिले भूगोल एकीकरण, त्यसपछि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा समय खर्च भएको हुँदा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि पछि प¥यो, अब बल्ल आर्थिक विकास र समृद्धिको चरण सुरु भएको छ । यो चरणमा युवाहरुले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर बहस हुन थालेको छ ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा आर्थिक रुपले समृद्ध नेपाल २१ औं शताब्दीको यो समयमा आइपुग्दा किन विश्वकै गरीव मुुलुकका रुपमा रहन बाध्य भयो ? के नेपालको विकास हुनै सक्दैन ? किन नेपाली युवाहरु खाडीको मरुभूमिमा ४० डिग्री बढी तापक्रममा पसिना बगाउन बाध्य छन् । त्यो स्थिति किन आयो ? आफ्नो देश छाडेर, समाज, परिवार, बालबालिका छाडेर जानुपर्दा खुशी हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यी सबै गरीवीकै कारण भएको हो ।
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ नेपाली जनताले झण्डै सात दशक लड्नु प¥यो । सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप राज्यसत्तामा धेरैथरी शक्तिहरु पुगे । कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी । तर उनीहरुको सोँच मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि भन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक दल र आफू वरिपरि रहेका केही कार्यकर्ताहरुको मात्रै जीवनस्तर उकास्ने भन्दा पर पुग्नै सकेन । जसले गर्दा मुलुक र जनता गरीब भए । अब पनि यो कुरा युवा पुस्ताले बुझ्न र समस्याको समाधान गर्ने गरी नेतृत्व लिन अलमल गर्दा मुलुक झन् पछि पर्छ । जनता यो पार्टीको नेतृत्वमा हुन्छ कि, त्यो पार्टीको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने अन्यौलतामा रहिरहे । तर जो–जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा कुनै पनि सरकारले काम गर्न सकेनन् । त्यसैले जनता पनि विकल्पको खोजीमा छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ नयाँ शक्ति पार्टीले आर्थिक समृद्धि र विकासको विकल्प दिनसक्छ त ? हो, हामीले अब विकल्प दिनैपर्छ । नयाँ शक्ति पार्टीमा युवा नेतृत्वको वर्चश्व छ । यसले पनि विकल्प दिन सकेन भने जनतामा निराशा अझ बढ्नेछ । नयाँ शक्तिले त्यो विकल्प दिनै पर्छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा आर्थिक रुपले समृद्ध नेपाल २१ औं शताब्दीको यो समयमा आइपुग्दा किन विश्वकै गरीव मुुलुकका रुपमा रहन बाध्य भयो ? के नेपालको विकास हुनै सक्दैन ? किन नेपाली युवाहरु खाडीको मरुभूमिमा ४० डिग्री बढी तापक्रममा पसिना बगाउन बाध्य छन् । त्यो स्थिति किन आयो ? आफ्नो देश छाडेर, समाज, परिवार, बालबालिका छाडेर जानुपर्दा खुशी हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यी सबै गरीवीकै कारण भएको हो ।
आज नेपालीहरु रोजगारीको निम्ति खाडी देशहरु, युरोप र अमेरिका जाने जुन परम्परा छ, त्यसको अन्त्य हुनेछ । साथै नेपालमा सुरु हुने उद्योगधन्दा, कलकारखानामा काम गर्नका लागि बरु विदेशबाट आउने छन् । त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नका लागि वैकल्पिक शक्तिसहितको पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।
हामीले केही नगरेकै कारण हामी गरीव भएका हौं । साँच्चै हामीसँग भएको स्रोत साधनको सही परिचालन गर्ने हो भने नेपाल संसारकै सबैभन्दा धनी र विकसित देश वन्न सक्छ । यसका लागि हामीसँग केवल इच्छाशक्ति र भिजनसहितको नेतृत्वको खाँचो छ । यो खाँचो युवा वर्गले पूरा गर्नुपर्छ । अब नेपाललाई गरीव होइन, संसारको विकसित र समृद्ध मुलुकहरुमध्ये एकका रुपमा स्थापित गर्न वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । हाम्रो देश विकसित भएपछि विदेशमा रोजगारीका लागि गएका ६० लाख नेपालीहरु आफ्नै घर फर्कने छन् । आज नेपालीहरु रोजगारीको निम्ति खाडी देशहरु, युरोप र अमेरिका जाने जुन परम्परा छ, त्यसको अन्त्य हुनेछ । साथै नेपालमा सुरु हुने उद्योगधन्दा, कलकारखानामा काम गर्नका लागि बरु विदेशबाट आउने छन् । त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नका लागि वैकल्पिक शक्तिसहितको पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।
हामीसँग स्रोत साधन नभएको होइन, केवल भिजनसहितको युवा नेतृत्व नभएको मात्रै हो । हामीसँग इच्छाशक्ति भयो भने त्यो पनि प्राप्त हुनेछ । अब हामीले सबैभन्दा पहिले इच्छाशक्तिसहित वैकल्पिक पार्टी निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यो अभियानमा युवावर्ग नै परिचालित हुनुपर्दछ । त्यसरी परिचालित युवा वर्गले सही काम गर्नसक्दा हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौं ।
जोशी नयाँ शक्ति पार्टीका युवा संगठनका प्रवत्ता हुन् ।